Jereo ny karatra paositra nomerika tsara indrindra amin'ny Krismasy | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | dia midika hoe, Templates
Iray amin'ireo Doany Krismasy tsara indrindra, ary very isika miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana karatra firariana Krismasy.
ny teknolojia vaovao ataovy izahay Andao hifanaraka amin'ny fotoana iainantsika. Mino izahay fa tsy maintsy manana saina misokatra ianao ary mandray ny safidinao rehetra. Amin'ny Internet isika dia hahita fahafaha-manao tsy manam-petra hanaitra ireo olon-tiantsika. Na dia tsy tokony hanilika antsika aza isika paositra amin'ny tanana, izay mety ho safidy tsara ihany koa na dia heverin'izy ireo a fampiasam-bola lehibe noho fotoana. Na ahoana na ahoana, amin'ity lahatsoratra ity hahita safidy maro isika isaky ny tsiro.
1 Karatra paositra niomerika
4 Fampiharana hiarahabana ny Noely amin'ny alàlan'ny finday
6 Kara-panondro mena
7 Fampiharana fehezanteny Krismasy
8 Karatra paositra mihetsika
10 Ny tenanao
11 Nico Cards
Karatra paositra niomerika
El format digital Izy io dia iray amin'ireo safidy ampiasaina indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ilay mahazatra sarin'ny fianakaviana izao dia alefan'i WhatsApp miaraka amina lahatsoratra fohy hiarahabana ny fetin'ny krismasy. Manana safidy nomerika hafa izahay hamoronana ny fiarahabana tratry ny Krismasy ho mamorona kokoa noho ny sisa amin'ireo fifandraisana.
Haneho anao izahay fampiharana sy tranokala sasany mamorona ny Arahabaina noely mora sy tanteraka maimaim-poana.
Raha manolo-tena amin'ny famolavolana isika, ny safidy mazava indrindra dia ny fampiasana a programa fanovana matihanina toa Photoshop na Illustrator. Na izany aza, mila antoka isika FAHALALANA y fahaiza-manao tsy isika rehetra no manana. Aza matahotra, satria misy izy ireo mpamoaka sary an-tserasera fa ankoatry ny maha- maimaim-poana tena izy ireo tsotra ny fampiasana. Izy ireo dia efa manana ny fitaovana krismasy rehetra hahafahanay mamorona karatra krismasy araka izay itiavantsika azy.
Ny ohatra voalohany omenay anao dia Fotor, tonian-dahatsoratra iray mamela antsika:
manao namboariny, izany hoe mamorona firaketana sary samihafa.
Design miaraka amin'ny loharano samihafa.
Rehefa eo amin'ny tranonkala isika, dia tsy maintsy mandeha mifidy ny safidy "Mamorona endrika"Ary amin'ireo safidy hiseho dia hisafidy isika"karatra”Mba hamoronana ny karatra Krismasy anay.
Tokony hotadidintsika fa tranokala io ao anglisy, noho izany, rehetra Tsy maintsy manao fikarohana amin'ny teny anglisy isika hahazoana valiny. Eo amin'ny sisiny dia afaka manampy sticker izay "autocollant”. Amin'ity tranga ity dia nanoratra "snowman" izahay, snowman amin'ny Espaniôla, ary safidy maro no nipoitra. Notaritarinay nankany amin'ny latabatra fiasana ny volavola izay tsy tianay intsony. Vitantsika izany apetraho io araka ny itiavantsika azy ary omeo azy ny habe marina.
Rehefa manana ny volavola vita isika, eo an-tampon'ny tranonkala no hananantsika safidy tahirizo ao anaty solosainao ilay rakitra sa afaka isika anjara mivantana avy amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy.
Pickmonkey es fitaovana manokana amin'ny famoronana karatra ho an'ny karazana fety, hetsika na sehatra rehetra. Manana betsaka iombonana efa noforonina hanamorana ny fomba famoronan'ilay mpampiasa ny endriny manokana.
Rehefa misafidy ny fizarana izay tiantsika hiasa isika dia haseho modely hafa vonona hanitsy amin'ny alàlan'ny bara hita eo amin'ny sisiny. Afaka ataontsika ampanjifaina amin'ny fanampiana ny sarinay sy ny lahatsoratray.
Fampiharana hiarahabana ny Noely amin'ny alàlan'ny finday
Ny safidy mety indrindra raha tsy manam-potoana firy isika mamorona karatra paositra Krismasy amin'ny findainao. Azontsika atao izany eo am-piandrasana ny bus, ao amin'ny efitrano fiandrasana isika na manana fotoana malalaka. Ho fanampin'izay, azontsika atao alefaso ny vondrona WhatsApp anay rehetra.
Ny fampiharana Justwink Azontsika atao ny mampiasa azy io hamoronana karazan-tsofina rehetra. ny iombonana dia tany am-boalohany, ary manome antsika ny fahafahana manampy audio, izay manome antsika plus izay tsy ny fampiharana rehetra no manolotra. Azo ampiasaina iOS y Android.
Fampiharana iray hafa izay tsy mahazatra. Manana a modely isan-karazany Azontsika atao ny manamboatra izay tiantsika. Ho fanampin'izany, mamela antsika handefa azy ireo nomerika amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy na ny safidin'ny pirinty azy ireo. Kitiho raha misintona iOS o Android.
Fampiharana fehezanteny Krismasy
Somary tsy mitovy io rindranasa io, saingy tianay ny manampy azy io satria mety hahaliana tokoa. Izy io dia fampiharana izay manangona fehezanteny Krismasy tsara kokoa. Izy ireo dia afaka mahita lahatsoratra tany am-boalohany halefa any amin'ny vondrona namanao WhatsApp.
Mety hahasoa raha iray amin'ireo olona izay ianao hainao ve izay soratana. Azo antoka fa hahazo aingam-panahy avy amin'ity tranonkala ity izahay. tsindrio eto.
Karatra paositra mihetsika
Safidy iray hafa tena tiako ny karatra paositra mihetsika, horonan-tsary isan-karazany hiarahabana ny Noely amin'ny fomba mahafinaritra kokoa. Andao hasongadintsika ny sasany tranonkala ahafahantsika mizara karatra paositry ny toetrany.
Ity tranonkala ity dia mamela antsika hamorona karatra krismasy miloko marevaka, azontsika atao ny manamboatra azy ireo mihetsika ary na dia ampio mozika ho azy ireo. Izany no mahatonga azy ireo carte postales tany am-boalohany sy mamorona. Na dia conservative kokoa aza isika dia afaka manao a paositra mahazatra. Ny marina dia misy isaky ny tsiro.
Izy io dia manana karatra karatra paositra mihetsika be dia be. Ny hany lesoka napetrakay tamin'ity tranonkala ity dia izany tsy mamela anao hanaingo azy ireo, satria efa noforonina ireo sarimiaina. tsindrio eto ary jereo ny safidinao rehetra.
Ity iray ity Page hamela anao hamorona paositra tena mampihomehy izay ny protagonista no ho anao. dia tsy maintsy apetraho ny tavanao ary ny an'ny olona tianao amin'ny vatan'ny elf. Mandihiza ny elf mandritra ny horonantsary, amin'ity fomba ity, dia hiseho fa mandihy ianao hiarahaba ny fialantsasatra. Manana mikasika ny vazivazy tonga lafatra hahazoana tsikitsiky amin'izay andefasanao azy. Tena mora ampiasaina. Azonao atao ny mandray ny sary amin'izao fotoana izao amin'ny fakantsary solosaina, na manantona iray izay anananao ao amin'ny galeriana.
En ity tranonkala ity, can amboary ny karatra paositra handefa azy ireo amin'ny fifandraisana tsirairay. Ianao dia tokony misoratra anarana ao amin'ny tahiry hahafahanao manana fidirana amin'ireo paositera carte animated ary azonao atao ny manangona azy ireo handefa azy ireo avy eo. Raha izaho manokana dia tsy iray amin'ireo tranonkala tsara indrindra any. Tsy manana tolotra mahasarika ny sain'ny maro ihany koa izy ireo.
Araka ny efa hitanao, ny lehibe ny safidy isan-karazany ary afaka mifidy ny iray amin'izy ireo isika. ny vokatra Ho tsara izany ary azo antoka fa ho tian'ny namantsika sy ny fianakaviantsika ny miarahaba ny Noely. Aza adino ny fomban-drazana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Karatra paositra niomerika ho an'ity Noely ity
Ity Freixenet Noely ity dia tsy manana bubble malaza
Sary famantarana Office vaovao sy nohavaozina an'ny Microsoft